Sida loo soo celiya iPhone ka Lugood iyo iCloud kaabta
Maxaad Ma rabtaa in aad Celinta iPhone
Dhowr sababo kara jira soo celinta aad iPhone. Aalaaba, dhibaato iPhone chronic waa motivator ah. Mararka qaarkood, socodka oo ah in laga bilaabo ilaa, loading barnaamijyadooda ama xitaa dib u dhac ku garaacaya ereyada aad iPhone ee keyboard waxaa laga yaabaa in lagu eedeeyo. Ama, haddii ay barnaamijyadooda ku joogto ah shil ama haddii aad iPhone jirsado laftiisa off, xataa marka batari waxaa si buuxda loogu soo oogay.
Soo celinta resets iPhone si aad u goobaha ay warshad ka dhigan tahay wax customizations aad uga dhigay ay nolosha qofka waa la tirtiray. Waxaa ka mid ah beddelka sida fudud oo generic sida dejinta ringtones kala duwan ee fariimaha iyo lambarrada ama image aad uga dhigin sidii aad soo jeeda iPhone ee, goobaha in ka badan caado, sida teebabka luqado kala duwan iyo formatting waqtiga iyo taariikhda aad iPhone. Marka laga adayga, isbedel kasta oo aad u samaysateen inaad aad iPhone tan iyo markii aad soo iibsatay waa dib marka aad soo celiyo.
Sida loo soo celiya iPhone
Qeybta 1: Tools kaa caawinaya inaad soo celinta iPhone Qeybta 2: ka Lugood gurmad Soo Celinta iPhone Qeybta 3: ka ee kaabta iCloud Soo Celinta iPhone
Qeybta 1: Tools kaa caawinaya in aad soo celinta iPhone
IPhone software kabashada xogta ugu horreeya adduunka ee inuu ka soo kabsado xiriirada lumay, SMS, sawiro, qoraalo, iyo in ka badan.
Soo Celinta iPhone si toos ah uga qalabka macruufka, gurmad Lugood iyo sidoo kale gurmad iCloud.
Ceshano xogta iPhone ilaa 18 nooc oo file, oo ay ku jiraan xiriiro, fariimaha, sawiro, qoraalo, iwm
Full la jaan qaada iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) 5 / 5S / 5C / 4s / 4 / 3GS.
Soo Celinta iPhone la eber khasaaro xogta, 100% ammaan ah.
Orod qalabka on your computer, iyo xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka la cable USB ah.
Haddii aad isticmaasho iPhone ah 4 ama iPhone 3GS, waxaad bedelan kartaa in ay "Advanced Mode" iyada oo loo marayo button ee geeska hoose ee midig.
Tallaabada 2. Scan ceshan aad iPhone xogta laga badiyay
Guji "Start Scan" si aad u hesho iPhone isla markiiba la marsiiyey. Skaanka aad qaadataa waqti qaar ka mid ah. Ka dib markii in, aad arki doonaa natiijada scan. Dhammaan xogta laga badiyay oo hadda jira ee aad iPhone waxaa lagu muujiyey in qaybood. Tag column bidix ee kooxda oo ku eegaan mid xogta ay ka mid. Sax shey kasta oo aad rabto oo guji "Ladnaansho" si loo badbaadiyo macluumaadka on your computer.
Tallaabada 1. Orod qalab iyo dooran gurmad Lugood ah
Orod qalabka, oo uu furmo suuqa hoose baxa. Guji "kabsado Lugood ee kaabta File" on sare ee suuqa kala hoose.
Sida aad ka arki, oo dhan Lugood aad files raad raac ah oo aad iPhone oo weligii synced la Lugood kombiyuutarka waxaa halkan ku qoran. Dooro mid ka mid Lugood gurmad file oo guji "Start Scan" si ay u soo saaro.
Tallaabada 2. Ladnaansho iPhone kaga imaanayo Lugood
Hadda, dhammaan xogta ku gurmad Lugood ee file waxaa lagu soo saaro oo soo bandhigay qaybaha. Iyaga Guudmar iyo eegista calaamadee ceshan kuwa aad rabto adigoo gujinaya "Ladnaansho" meesha ugu hooseysa.
Fiiro gaar ah: Xogta soo bandhigay natiijada baaritaan ku jira tirtiray iyo waxyaabaha hadda jira ee aad iPhone. Labada iyaga ka mid ah waxay leeyihiin midab gaar ah. Haddii aad rabto in aad u kala sooci, waxaad isticmaali kartaa badhanka dusheeda: bandhigaan waxyaabaha tirtiray oo keliya.
Tallaabada 1. Orod qalab iyo doortaan celin iPhone ka iCloud
Ka dib markii socda Wondershare Dr.Fone ee macruufka, doorato habka soo celinta - "kabsado iCloud ee kaabta faylasha" dusheeda. Markaas waxaad heli suuqa kala this on xaq. Buuxi xisaabtaada iCloud iyo password inay la soo wareegto in.
Fiiro gaar ah: Qalabkani waxa uu qaadanayaa gaarka ah si dhab ah. Waxaan marnaba diiwaan kasta oo aad info account Apple ama content waqti kasta inta lagu jiro kalfadhiyada aad.
Tallaabada 2. Scan iCloud gurmad iyo celin doonaa iPhone
Qalabkani waxa uu ka heli dhan iCloud files gurmad in aad xisaabta. Dooro mid ka mid doonayay oo guji "Download" si aad u hesho iCloud gurmad file ka soo dejisan.
Markaas, iskaan content iCloud ah adigoo gujinaya "Scan". Scan wuxuu noqon doonaa dhameystiran dhowr daqiiqo. Ka dib markii in, eegis ku dhowaad dhammaan xogta aad iCloud gurmad file, oo ay ku jiraan xiriiro, fariimaha, sawiro, xogta etc.Tick aad la doonayo iyo riix "Ladnaansho badhanka" iyaga badbaadiya on your computer ee 1 click.
Fiiro gaar ah: Inta aynaan xidhin qalabka, aad dib karaan shaashada guriga si ay u tirtirto ah gurmad soo bixi iCloud ka your computer. Markaas gasho baxay xisaabtaada iCloud.
EaseUS MobiSaver Free waa qalab si sahlan loo isticmaalo oo gebi ahaanba bilaash ah soo kabashada xogta iPhone.
Kabsado WhatsApp taariikhda ka iPhone; ceshano Windows XP gurmad Lugood
Taageerada inuu ka soo kabsado xogta ka iPhone iyo Macdan xogta laga gurmad Lugood.
Xiriirada 100% free soo kabsado tirtiray, SMS, Notes, Videos, Photos, ECT ka iPhone, iPad, iPod taabto.
Kabsado xogta iPhone lumay ay sabab u tahay tirtirka shil ah, Hagaaji macruufka, iPhone lumay / jabay.
Dhawaan taageeraan iOS7, iPhone5s / 5c, iPad Air, iPad Mini la isha Display.
Baro wax badan oo ku saabsan EaseUS MobiSaver Free >>
Qeybta 2: Soo Celinta iPhone kaga imaanayo Lugood
1. Content in karaa / aan la soo celin karin
Lugood dib kartaa goobaha, Messages, Roll Camera, waraaqaha, badbaadiyey kulan, iyo macluumaad kale. Hayaan oo aanay ku content synced in aad iPhone, sida filimada, muusikada, podcasts, iyo barnaamijyadooda.
Aad u ilaalin karto gurmad la habayn isticmaalaya fursad u kaabta sir in ay leeg- Kooban. Imayladad, aad gurmad dib doonaan ilaa aad Keychain. Sidaas, sirta account email, sirta Wi-Fi, iyo sirta aad galaan bogagga internetka iyo codsiyada qaar ka mid ah waxaa lagu xasuusan doonaa marka aad wareejiyo iPhone cusub.
Xiriirada waa qayb ka mid ah gurmad ah loo ilaalin ku baaqay dhawaan iyo liiska ugu cadcad. Back aad xiriirada in tababare taageeray macluumaadka shakhsiyeed (Pim), iCloud, ama adeeg kale oo daruur ku salaysan in ay ka fogaadaan wax kasta oo iman kara khasaaraha xogta xiriir.
2. Talaabooyinka si loo soo celiyo iPhone ka files bakup deegaanka
1.Connect aad iPhone in kombiyuutarka aad si caadi ah u hagaagsan oo dooro aad iPhone.
2.Click Kooban oo guji Soo Celinta kaabta ... .
Fiiro gaar ah: Haddii aad gurmad waxaa Windows XP, Lugood weydiinaya in aad qortaa erayga sirta ah ka hor dib u soo celinta files iyo goobaha aad. Hayaan lo qabto icon qufulka in liiska hayaan in iPhone Lugood ah preferences.Encrypt hayaan aad: Dooro "gurmad sir iPhone," nooca sirta ah, oo guji Set Password.
3. Xaggee hayaan Lugood kaydiyaa on your computer
Folder ayaa meesha aad xogta gurmad waxaa lagu kaydiyaa ku xiran tahay nidaamka qalliinka computer ee. Hubi galka gurmad waxaa ka mid ah in aad joogtada ah xog-gurmad. Lugood meelaha files gurmad meelaha soo socda:
Mac: ~ / Library / Codsiga Support / MobileSync / kaabta / The "~" ka dhigan folder Home aad. Haddii aadan arki Library gal gurigaaga, qaban Xulashada iyo guji menu Go ah. Windows XP, Documents \_ iyo Settings \_ (username) \_ Codsiga Data \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ \_ kaabta Si dhaqso ah u helaan ka folder Codsiga Data, riix Start, iyo dooran Run. Nooca% appdata% oo guji OK . Windows Vista / 7/8 : \_ Users \_ (username) \_ AppData \_ barqiyey \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ \_ kaabta Si dhaqso ah u helaan folder AppData ah, riix Start. In bar raadinta, nooca% appdata% iyo saxaafadda noqo.
Sidoo kale, haddii aad rabto, aad tirtirto yaabaa gurmad ah. Haddii aad rabto in aad tirtirto gurmad ah ay abuureen Lugood, raac talaabooyinkan: - rabtid Lugood Open: Windows: Dooro Edit > rabtid Mac: Dooro Lugood > rabtid - Click iPhone (aad iPhone uma baahna in lagugu xiro). - Lugood tusi doono tirada telefoonka, IMEI, iyo lambarka taxanaha ee iPhone xoojiyaa marka aad dhig tilmaamaha mouse ka badan gurmad ah (Lugood muujinaysaa oo keliya tirada taxanaha ah ee iPad iyo iPod taabto). Waxaad u isticmaali kartaa si aad u hesho gurmad aad rabto inaad tirtirto. - Dooro gurmad aad rabto in aad ka saarto oo guji Delete kaabta.
Qeybta 3: Soo Celinta iPhone ka kaabta iCloud
1. Content in / aan la celin karin ka gurmad iCloud
iCloud ka dhigaysa Lugood, xataa si fiican, maxaa yeelay, music, filimada, bandhigyada TV, barnaamijyadooda, buugaagta, iyo in ka badan oo aan ku noolaan kaliya on your computer, laakiin on oo dhan iPhone kale, sidoo kale. Tusaale ahaan, la iCloud, music aad ka iibsatid Lugood Store si toos ah u muuqataa on iPhone oo dhan.
Iyadoo iCloud, waxaad ka heli kartaa koonto iCloud.com email in ay ad-free, waa ilaa taariikhda meel walba aad u hubiso, oo ka mid ah Webmail ee iCloud.com. Just shid Mail ee goobaha iCloud iyo raac tilmaamaha onscreen.
2. iCloud kaydinta iyo gurmad
Markii aad saxiixdo iCloud, aad si toos ah u hesho 5 GB ee lagu kaydiyo oo lacag la'aan ah. Your kaydinta iCloud loo isticmaalo iCloud kaabta, xogta app iyo waraaqaha lagu kaydiyaa iCloud, iyo iCloud Mail (aad @ icloud.com email account).
iCloud si toos ah u taageeray ilaa maalin kasta aad iPhone badan Wi-Fi halka uu gagadin, qufulan, oo ku xiran il awoodeed ah. Iyada oo aad macluumaad iPhone xoojiyaa in iCloud, waxaad si fudud u samaysan karta iPhone cusub ama soo celin macluumaad ku saabsan mid ka mid ah aad horey u.
Your gurmad iPhone ka mid ah oo kaliya xogta iyo goobaha ku kaydsan aad iPhone. Waa kuma jiraan macluumaadka horey u kaydiyaa iCloud, tusaale ahaan xiriirada, jadwalka taariikhda, Bookmarks, farriimo mail, qoraalo, sawir la wadaago durdurro, My Photo Stream, iyo waraaqaha idin badbaadiyeen iCloud isticmaalaya macruufka barnaamijyadooda iyo barnaamijyadooda Mac.
3. Soo Celinta aad iPhone kaga imaanayo iCloud ah.
Tallaabada 1. aad iPhone, u tag Settings > General > Software Update . Haddii version a cusub ee macruufka waa la heli karaa, raac tilmaamaha onscreen in ay soo baxdo iyo rakibi waxaa. Waa in aad in nooca ugu dambeeya ee macruufka cusboonaysiiso iPhone si loo hubiyo in aad soo celin karaa gurmad ah ugu danbeeyay ee iPhone kale, sida iPhone lumay ama la jejebiyey.
Tallaabada 2. Waxaad hubisaa in aad leedahay gurmad ah soo dhaafay in la soo celiyo ka. Tag Settings > iCloud > Kaydinta & kaabta , ka dibna eegto hoose ee shaashadda ah ee fariinta kaabta hore, waxaana ku xiga taariikhda gurmad ugu dambeeyay.
Tallaabada 3. Tag Settings > General > celi , markaas ka jaftaa masixi content oo dhan iyo goobaha .
Tallaabada 4. In Kaaliyaha Setup ah, sii soco ilaa Calan aad iPhone , ka jaftaa Soo Celinta ka kaabta ah , ka dibna u saxiixo in si aad iCloud.
Tallaabada 5. soco in Dooro gurmad ka dibna uu ka soo xusho liiska hayaan heli karaa iCloud.
4. Ka dib markii la isticmaalayo gurmad iCloud ah si loo soo celiyo ama calan kor u iPhone ah:
Your goobaha iyo xisaabaadka waxa lagu soo celiyay ka gurmad iCloud aad dooratay. Xirey kadibna iPhone iyo bilaabmaa degsado music aad iibsatay, filimada, bandhigyada TV, barnaamijyadooda, buugaagta, Roll Camera, iyo waxyaalaha kale ee. Haddii aad iPhone aan kala soo bixi kartaa version of app ah in la xoojiyaa, waxaa downloads version ugu dambeeyay. Content aad soo iibsatay waxaa si toos ah soo bixi Lugood dukaanka, App Store, ama iBooks Store ku salaysan Lugood in helitaanka Cloud oo ay dalka. Gadashada Previous waxaa laga yaabaa maqan haddii ay la soo celin ama mar dambe ayaa laga heli karaa dukaanka.
- Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad gasho sirta ah ee Lugood, App Store, iyo xisaab iBooks Store in la soo celiyo alaabta iibsatay.
- Baararka Horumarka muuqan hoos ku qoran astaanta screen Home for barnaamijyadooda la bixi. Si aad app ah muhiimada koowaad ee duuban, ay icon jaftaa. Si aad u hubiso haddii macluumaadka aad iPhone si buuxda loo soo celiyo, u tag Settings > iCloud > Kaydinta & kaabta .
A Transfer Tool Great iPhone Waxaad u
Dhoofinta iPhone Messages in Computer
Bedelka iPhone Photos in Computer
Bedelka Content iPhone in Android
Hababka Easy in ay iPhone kaabta in PC
Farqiyada u dhexeeya Android & iPhone
Best 17 Apps u Users iPhone
Apps ka Lugood wareejiyo iPhone
Jailbreak iPhone 4s in waddaa macruufka 7
Data ka dhaqaaq BlackBerry si iPhone
PNY safaaradii Recovery: Talaabooyinka inuu ka soo kabsado Khasaaray Xogta laga PNY safaaradii Flash Drive
> Resource > Ladnaansho > Waa maxay iPhone celinta iyo Sida loo Soo Celinta iPhone ka Lugood iyo iCloud kaabta